မြန်မာ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊ - MYSTERY ZILLION
မြန်မာ font နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ၊
ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာစာသေချာဖတ်လို့ရပြီး ရေးတဲ့အခါလည်း မြန်မာစာသေချာရေးလို့ရအောင်လုပ်ချင်ပါတယ်။
font တွေနဲ့ပတ်သက်ရင် ကျွန်တော်သိတာ ဇော်ဂျီလောက်ပါပဲ၊ နောက်ဘယ်လိုတွေဖြစ်သွားပြီလဲ မြန်မာပြည်က ဘာတွေသုံးနေကြလဲမသိတော့ပါဘူး။
**ကျနော့်ပြသနာက develop လုပ်မယ့်ကွန်ပြူတာမှာထည့်ထားတာက မြန်မာ၃ယူနီကုဒ်ဗျာ
တခြား device ကနေဝင်ကြည့်ရင် မြန်မာစာလုံးတွေက လွဲချော်ကုန်ပြီ။ (သွင်းထားတဲ့ဖောင့်မတူလို့ထင်တယ်)
ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့ဗျာ(ဖြစ်နိုင်မှပါ)user ကို ဟိုဖောင့်သွင်းပါ ဒီဖောင့်နဲ့ရေးပါ လို့မပြောပဲနဲ့ သူတို့ပါသုံးသုံး မြန်မာစာ သေချာရေးလို့ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်တဲ့နည်းရှိလားဗျ၊
ဖြည့်စွက်သိချင်တာလေးက ကျနော်တို့ဆီမှာ ဘုံမြန်မာဖောင့် မရှိဘူးလားခင်ဗျာ?
အစ်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ pc browser ကနေသေချာဖတ်လို့ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ပြသနာက ကျနော်ဖုန်းနဲ့ ကြည့်တော့ စာလုံးတွေလွဲချော်ကုန်တယ်ဗျ။
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ ဖုန်းနဲ့ကြည့်တုန်းက အင်တာနက်ဖွင့်ထားလားမသိဘူးနော်အကို! သူက Google Fonts server ကိုလှမ်းချိတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ် Device ပဲကြည့်ကြည့် အင်တာနက်ဖွင့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျ။